မြေများ အကွက်ဖော် ရောင်းစားနေမှု လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုး ဖြစ်နေ?? - Yangon Media Group
မြေများ အကွက်ဖော် ရောင်းစားနေမှု လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုး ဖြစ်နေ??
မြေများ အကွက်ဖော်ရောင်းစားနေကြခြင်းသည် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။ သြဂုတ် ၆ ရက် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း လယ်ယာမြေ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို စည်းကမ်းမဲ့စွာအကွက်ဖော်ရောင်းစားနေကြခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးယူပေးရန် အဆိုတင်သွင်းရာ၌ မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်းက ယင်းကဲ့သို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
”လယ်ယာမြေဥယျာဉ်ခြံမြေများကို စည်းကမ်းမဲ့စွာ အကွက်ဖော် ရောင်းစား နေကြခြင်းတို့သည် ပြီးခဲ့သော အစိုးရ လက်ထက်တွင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုလက် ရှိ အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ပုန်းလျှိးကွယ်လျှိုး ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းကြောင့် အဓိကသက်ဆိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ စည်ပင်နှင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတို့၏ လျော့ရဲပြီး အဂတိမကင်းသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိရောက်စွာ ထိန်းညှိပေးနိုင်သည့် အစီအမံတစ်ခုအား အမြန်ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်း ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
”ဘာမှဝေဖန်ပြောဆိုလို့မရတဲ့ခေတ် တွေမှာ ဒါတွေ စဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြစ်နေဆဲမို့ ဒီအစိုးရလည်း ဘာမှမထူးပါဘူးကွာဆိုတဲ့ အမြင် တွေ အပြောတွေဟာ ပြည်သူတွေကြား မှာ တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လောင်လာတာကြောင့် အဆိုတင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လွဲမှားသော စီမံခန့်ခွဲမှုများ မပြုလုပ်မိစေရန် မြေယာကဏ္ဍတွင် တာဝန် ပေးမည့်သူများကို သေချာစွာ ရွေးချယ် ကြရန်လိုကြောင်း၊ မိမိဒေသကို ချစ် မြတ်နိုးသူများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးစား ပေးပြီး ရေရှည်အကျိုး မျှော်ကြည့်တတ်သူများ၊ အများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်နိုင်သူများ၊ အဂတိတရားကို မနှစ်မြို့သည့်သူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီများက စီမံခန့်ခွဲမှသာလျှင် ရေရှည်တွင် စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းအဆိုကို လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဝင်းက ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်၏သဘောထားရယူရာ သဘောတူသည့်အတွက် လက်ခံဆွေးနွေးရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။
သက်ကြီး လူရွှင်တော်များ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲအတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်းကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြ
မန်ယူက စိတ်ဝင်စားနေသော မီနာကိုခေါ်ယူရန် အဲဗာတန် သဘောတူညီမှု ရဟုဆို
ထိုင်းဘုရင့် ဖလား ဖိတ်ခေါ်ပိုက်ကျော်ခြင်း ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ့ ပြိုင်
သစ်ခိုးထုတ်သည့် လမ်းအကြောင်းကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက လာဖြေသဖြင့် ဘုန်းကြီးနှင့် ဘီးကဲ